Litecoin waa maxay iyo sida loo iibsado iibso Litecoin? Dhammaan wixii ku saabsan LTC | War gadget
Waa maxay Litecoin iyo sida loo iibsado Litecoin?
Michael Gaton | | Criptomonedas, General
Litecoin waa lacag dhibic-ilaa-dhibic dijitaal ah (P2P) taasi waxay ku saleysan tahay softiweer furan oo suuqa soo galay sanadkii 2011 iyadoo lagu kabayo Bitcoin. Si tartiib tartiib ah ayey u noqoneysaa qarsoodi qarsoodi ah oo ay adeegsadaan isticmaaleyaal aad iyo aad u tiro badan, badanaa sababta oo ah fudeyd ay noocyadan lacageed lagu soo saari karo, oo aad uga hooseeya tan Bitcoin.
In kastoo haddii aan ka hadalno lacagaha dijitaalka ah ama loo yaqaan 'cryptocurrencies' Isla markiiba Bitcoins ayaa maskaxda ku soo dhaca. Laakiin maahan kan kaliya ee laga heli jiray suuqa, aad uga fog, muddo dhowr sano ah, Ethereum waxay noqotay beddel dhab ah oo Bitcoin ahIn kasta oo haddii aan nafteenna ku salayno qiimaha mid kasta oo ka mid ah lacagahan, haddana waxaa jira waddo dheer oo loo maro in lagu noqdo beddel dhab ah oo loo yaqaan 'Bitcoin', lacagtaas oo noqotay nooc ka mid ah lacag bixinta qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn sida Microsoft, Steam , Expedia, Dell, PayPal si loo magacaabo tusaalooyin yar.
Waxaad rabtaa maal gasho Litecoin? Waa hagaag hel $ 10 BILAASH Litecoin adoo gujinaya halkan
Qodobkaan waxaan ku tusi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Litecoin, waxa ay tahay, sida ay u shaqeyso iyo halka laga iibsanayo.
1 Waa maxay Litecoin
2 Farqiga u dhexeeya Litecoin iyo Bitcoin
3 Yaa abuuray Litecoin
4 Sideen kuhelaa Litecoins
5 Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka Litecoin
6 Sida loo iibsado Litecoins
Waa maxay Litecoin
Litecoin, sida lacagaha kale ee dijitaalka ah, waa magac qarsoodi ah oo qarsoodi ah oo la abuuray 2011 si loogu beddelo Bitcoin, oo ku saleysan shabakad P2P ah, sidaas marna ma xukumaan hay'ad kasta, sida haddii ay ku dhacdo lacagaha rasmiga ah ee dhammaan waddammada, markaa qiimaheedu wuu kala duwan yahay hadba baahida loo qabo. Aqoonsi la'aanta lacagtan ayaa ogolaaneysa qari aqoonsiga markasta ee dadka fuliya macaamil ganacsi, tan iyo markii lagu fuliyo jeebka elektarooniga ah halkaas oo dhammaan lacagahayada lagu kaydiyo. Dhibaatada noocyadan lacageed waa lamid sidii had iyo jeer, maadaama hadday na dhacaan, ma lihin hab aan ku ogaan karno cidda boorsadeena ka faaruqisay.
Xannibaadda, oo si fiican loogu yaqaanno xannibaadda, ee Litecoin waxay awood u leedahay inay maareyso mug weyn oo macaamil ka badan Bitcoin. Sababtoo ah wax soo saarka xannibaadda ayaa ah mid soo noqnoqda, shabakaddu waxay taageertaa macaamil badan iyada oo aan loo baahnayn in wax laga beddelo barnaamijka si joogto ah ama mustaqbalka dhow. Sidaas darteed, baayacmushtariyaashu waxay helaan waqtiyo xaqiijin oo dhakhso ah, iyagoo ilaalinaya waxay awood u leeyihiin inay sugaan xaqiijin dheeraad ah markay iibinayaan waxyaabaha qaaliga ah.
Ahaanshaha mid ka soo jeeda ama fargeeto ah Bitcoin, labadaba cryptocurrencies waxay adeegsadaan isla nidaamka hawlgalka farqiga ugu weyni waa laga helaa tirada arrinta malaayiin qadaadiic ah, oo ku yaal kiiska Bitcoin ee 21 milyan, halka xadka ugu badan ee Litecoins waa 84 milyan, 4 jeer ka badan. Kala duwanaanshaha kale waxaa laga helaa caan ka ahaanshaha labada lacagood, halka Bitcoin si ballaaran loo yaqaan, Litecoin wax yar ayey tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ugu sameyneysaa suuqan lacagaha dalban.
$ 10 BILAASH ku hel Litecoin adoo gujinaya halkan
Farqiga kale waxaa laga helaa markay tahay helitaanka lacagaha dalwaddii. Halka macdanta Bitcoin adeegsato algorithm SH-256, kaas waxay u baahan tahay adeegsi processor aad u sarreeya, Nidaamka macdanta ee Litecoin wuxuu ku shaqeeyaa scrypt u baahan qadar badan oo xusuus ah, isagoo ka tagaya processor-ka.
Yaa abuuray Litecoin
Shaqaale hore oo Google ah, Charlie Lee, waa midka ka dambeeya abuuritaanka Litecoin, iyadoo la tixgelinayo la'aanta beddelaad suuqa sarrifka lacagaha iyo markii aysan weli noqon lacag guud oo nooc kasta oo lacag ah. Charlie wuxuu ku tiirsanaa Bitcoin laakiin ujeedkiisu waa lacagtan loogu beddelo qaab lacag bixin oo xasiloonayd oo aan si xad dhaaf ah ugu tiirsaneyn guryaha la isweydaarsado, wax aan awoodno inaan xaqiijino kuma dhacdo Bitcoin.
Marka si lacagtan aysan u saameynin mala-awaalka, habka loo helo iyaga ayaa aad uga fudud uguna caddaalad badan, sidaa darteed markii la abuuray, howshu ma ahan mid cakiran ama yareynaysa tirada lacagaha la heli karo. Bitcoin waxaa loogu talagalay inay maamusho ilaa 21 milyan oo qadaadiic ah, halka Litecoin ay ku jiraan 84 milyan oo shilin.
Sideen kuhelaa Litecoins
Litecoin waa fargeeto ah Seeraar, sidaas software loogu talagalay bilaabaan macdanta Bitcoins ficil ahaan waxay la mid tahay wax ka beddelka yar. Sidii aan kor ku soo sheegay, abaalmarinta macdanta Litecoins ayaa ka macaash badan Bitcoin. Waqtigan xaadirka ah dhisme kasta oo cusub waxaan helnaa 25 Litecoins, oo ah qaddar la dhimay nuskiiba 4tii sanoba qiyaas ahaan, qaddar aad uga hooseeya waxa aan heleyno haddii aan nafsadeena u hurayno macdanta Bitcoins.
Litecoin, sida dhammaan lacagaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies', waa mashruuc il-furan oo softiweer ah oo lagu daabacay hoosta liisanka MIT / X11 oo noo oggolaanaya inaan socodsiinno, wax ka beddelno, nuqul ka qaadno softiweerka oo u qaybinno. Barnaamijka waxaa lagu sii daayaa nidaam hufan oo u oggolaanaya xaqiijinta madaxbannaan ee binaries iyo koodhka ilaha u dhigma. Software-ka lagama maarmaanka u ah bilaabida macdanta Litecoins waxaa laga heli karaa Bogga rasmiga ah ee Litecoin, waxaana loo heli karaa Windows, Mac, iyo Linux. Waxaan sidoo kale heli karnaa koodhka isha
Hawlgalka arjiga wax qarsoodi ah ma leh, maxaa yeelay waa inaan kaliya soo dejiso barnaamijka oo wuxuu bilaabi doonaa inuu shaqadiisa qabsado, anaga oo aan u baahnayn in aan soo faragalino wakhti kasta. Codsiga laftiisu wuxuu ina siinayaa marin boorsada ay ku kaydsan yihiin dhammaan Litecoins-ka aan helayno iyo halka aan ka diri karno ama ka heli karno lacagahaas dal-ku-galka ah iyo sidoo kale la-tashiga dhammaan macaamillada aan sameynay illaa hadda.
Hab kale oo loo qodayo Litecoins iyada oo aan la maalgelin kombuyuutar, waxaan u aragnaa Scheriton, nidaamka daruuraha macdanta Taas oo aan sidoo kale ku qodan karno Bitcoins iyo Ethereum. Scheriton waxay noo ogolaaneysaa inaan dhisno xaddiga GHz ee aan dooneyno inaan u qoondeeyno macdanta, si aan u iibsanno awood dheeri ah oo aan ku heli karno Litecoins-keena ama lacagaha kale ee dal-ku-galka ah si deg deg ah.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka Litecoin
Faa'iidooyinka ay Litecoin na siiso ayaa ficil ahaan isku mid ah oo aan ka heli karno inta ka hartay lacagaha dalwaddii ah, sida amniga iyo aqoonsi la'aanta markii aan fulineyno nooc kasta oo macaamil ganacsi, maqnaanshaha guddiyada tan iyo macaamillada waxaa laga sameeyaa isticmaale ilaa isticmaale iyada oo aan la faragelin hay'ad sharciyeyn ah iyo xawaare, tan iyo markii loo wareejiyo lacagtan noocan ah isla markiiba.
Dhibaatada ugu weyn ee ay maanta wajaheyso lacagtaan ayaa ah inaysan u caan aheyn sida Bitcoin maanta oo kale noqon karto, lacag dadkoo dhami ogyihiin. Nasiib wanaagse, mahadsanid caansaanka lacagtaan, inta hartay ee suuqa laga helayo ayaa sii badanaya adeegsadayaasha, in kasta oo xilligan aysan joogin heerka Bitcoin, lacag ay shirkadaha waaweyn qaarkood horay u bilaabeen loo isticmaalo sida habka lacag bixinta.
Sida loo iibsado Litecoins
Haddii aynaan ugu talagalin inaynaan bilaabin macdanta Litecoins, laakiin waxaynu doonaynaa inaynu soo galno adduun lacageed dalxiis oo aan magac lahayn, waxaan dooran karnaa iibso Litecoins iyada oo loo marayo Coinbase, adeegga ugu fiican hadda waxay noo ogolaaneysaa inaan ku fulino nooc kasta oo macaamil macaamil lacageed. Coinbase waxay na siineysaa codsi aan kula tashano akoonkeena waqti kasta oo loogu talagalay labada iOS iyo Android, waa codsi na siiya macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan isbeddelada suurtagalka ah ee ku yimid lacagta.
Ma rabtaa inaad maal gashato Litecoin?
Halkan guji si aad u iibsato Litecoin
Si loo iibsado lacagtan dal-ku-galka ah, waa inaan marka hore ku darno kaarka deynta ama aan ku sameyno koontadayada bangiga.
Ha moogaanin $ 10 BILAASH ee Bitcoin adoo gujinaya halkan!
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Tiknoolaji » Criptomonedas » Waa maxay Litecoin iyo sida loo iibsado Litecoin?